UKumkani waseSpain unomyalezo obalulekileyo kubathunywa be-UNWTO, iSpain kunye noKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » UKumkani waseSpain unomyalezo obalulekileyo kubathunywa be-UNWTO, iSpain kunye noKhenketho
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
UKumkani waseSpain ubonisa inkxaso eyomeleleyo ye-UNWTO njengombutho
Ukhenketho lishishini lasebukhosini eSpain.
INdibano Jikelele ezayo ye-UNWTO inokuba sisiganeko esibalulekileyo kwishishini elisengxakini - uKhenketho lweHlabathi.
Oku kuvunywa yiSpain, ilizwe elisindleke uMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO).
Akakho omnye ngaphandle koMhlekazi wakhe, obekekileyo uFelipe VI, uKumkani waseSpain, uyakuqonda ukubaluleka kokhenketho kwilizwe lakhe nakwihlabathi.
Kwakhona uyayazi indlela ekubaluleke ngayo ukuba ilizwe elisindleke umbutho weZizwe Ezimanyeneyo ligcine ubundilele. KuKumkani, ukusingatha isidlo se-UNWTO Abathunywa nabo bathumela umyalezo wokuba inkqubo yokuvota eyimfihlo kunye nekhuselekileyo inokuqinisekiswa eSpain.
ESpain kutshanje waqala ukubumba ikamva lokhenketho kwiFII eRiyadh, eSaudi Arabia.
Eyokuqala amazwe amaninzi, iManyano yezoKhenketho enabachaphazelekayo abaninzi yayiyinkwenkwezi entsha kwi-COP26 e-Glasgow, xa iSpain ihlangene namanye amazwe angama-9 ukuba abe liqabane kulo mfelandawonye.
Ubukhosi baseSpain, okanye ubukhosi baseSpain, obubizwa ngokomgaqo-siseko njengeCrown, liziko lomgaqo-siseko kunye neyona ofisi iphakamileyo yaseSpain. Ubukhosi bubandakanya inkosi elawulayo, usapho lwayo, kunye nentlangano yendlu yasebukhosini exhasa kwaye iququzelele ukumkani ekusebenziseni imisebenzi yakhe kunye namalungelo akhe.
Njengomntu okwisikhundla sakhe kunye nesiqu, uKumkani waseSpain unokufanekisela umyalezo obalulekileyo wokuxhasa ishishini (ukhenketho), kunye neziko. (UNWTO), ngaphandle kokubonakala kokuphazanyiswa, ukuvuma, okanye ukukhatywa kwimiba efana nevoti eyimfihlo ukuze kuqinisekiswe uNobhala-Jikelele.
Ke ngoko, ukuba noHloniphekileyo ukusingatha isidlo sangokuhlwa sabathunywa kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo ezayo ye-UNWTO evela kwihlabathi liphela ibonisa umyalezo wakhe othe cwaka wokungathathi hlangothi kwaye unokubonwa njengenkxaso enkulu kukhenketho lwehlabathi ngokubanzi.
The Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi iyakuqonda ukubaluleka kweli nyathelo kwaye ikhuphe le ngxelo ilandelayo namhlanje.
Impendulo ye-WTN kwiNkxaso yobuNgangamsha bakhe, obekekileyo uFelipe VI, uKumkani waseSpain, kuKhenketho lweHlabathi.
I-Honolulu, eHawaii, eU.SA - I-World Tourism Network inqwenela ukuvakalisa umbulelo wayo omkhulu kuMhlekazi uFelipe VI, uKumkani waseSpain, ngokuxhasa kwakhe ukhenketho.
UGqr Peter Tarlow, uMongameli we-WTN, kunye UGqr Taleb Rifai, Umxhasi we-WTN kunye noNobhala-Jikelele we-UNWTO owayesakuba, waphawula ukuba uMangangamsha usebenze ukuxhasa ishishini lokhenketho lilonke, kwaye njengoko kufanelekile ukuba umntu okwinqanaba lakhe, uye wakuphepha ukuvunyelwa kwakhe.
UKumkani uFelipe VI usebenze ngokuzimisela ekuziseni ukuvuselelwa kweshishini lezokhenketho.
I-WTN yothulela umnqwazi uKumkani uFelipe VI kwaye ivakalisa umbulelo wayo ngako konke uKumkani akwenzele ushishino lwezokhenketho lwehlabathi.
Uthungelwano lwezoKhenketho lweHlabathi (i-WTN) lilizwi ekudala lilindelwe lamashishini amancinci naphakathi okhenketho kunye nokhenketho kwihlabathi jikelele. Ngokudibanisa iinzame zethu, i-WTN izisa phambili iimfuno neminqweno yamashishini amancinci naphakathi kunye nabachaphazelekayo. I-WTN ayithetheleli kuphela amalungu ayo kodwa ibanika ilizwi kwiintlanganiso ezinkulu zokhenketho. I-WTN ibonelela ngamathuba kunye nothungelwano oluyimfuneko kumalungu ayo kumazwe ali-128. Iinkcukacha ezithe xaxe: www.wtn.travel